Puntland oo eedeyn u jeedisay Ra’iisul Wasaare Khayre | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Puntland oo eedeyn u jeedisay Ra’iisul Wasaare Khayre
Puntland oo eedeyn u jeedisay Ra’iisul Wasaare Khayre
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo labadii cisho ee la soo dhaafay ku sugnaa Koonfurta Magalada Gaalkacyo ayaa shalay gelinkii dambe waxaa uu booqasho ku tegay Waqooyiga Gaalkacyo, waxaana booqashadaas dhaliil ka keenay Maamulka Puntland oo deegaan ahaan maamula.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaare Kheyre uu ka weecday maqaamka sare oo ay ugu talo galeen inay ku soo dhaweeyaan, islamarkaana qorshayaal kale oo u gaar ah uu la tegay Gaalkacyo.
Shir Jaraa’id uu Warbaahinta Gaalkacyo ugu qabtay Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland ayuu sheegay in Ra’iisul Wasaaraha ay Madaxtooyadda Gaalkcyo ugu diyaariyeen mas’uuliyiin iyo waxgarad si uu ula kulmo, hayeeshee taasi uu ka diiday, isla markaana uu la hadlay dhalinyaro meel ugu diyaarsanaa sida uu hadalka u dhigay.
Ra’iisul Wasaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre oo socdaal ku maraya deegaano ka tirsan Maamulka Galmudug ayaa waxaa warar soo baxayay ay sheegayeen in booqashada uu ku tegay Waqooyiga Gaalkacyo ay aheyd mid aan horay loo sii qorsheyn.
Hadalka kasoo yeeray Maamulka Puntland ayaa qayb ka ah khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Maamulka Puntland.